eNasha.com - विरोधको नौलो शैली
कुनै पनि व्यवसायको सफलताको सूत्र के हुन्छ ? उत्तर सहज छ, उपभोक्ताहरुहरुलाई सन्तोषजनक सुविधा दिनु र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको कुरा गर्दा विनारोकावट २४ सै घण्टा सुचारु इन्टरनेट प्रदान गर्नु हो । छोटो अवधिका लागि मात्र पनि इन्टरनेट 'डाउन' हुनुको अर्थ हुनसक्छ, सयौँ ग्राहकहरु गुम्नु । तर यस्तो अत्यन्त जरुरी सेवा अन्तर्गत पर्ने इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरुले इन्टरनेट 'डाउन' गरेर विरोधको नौलो शैली देखाएका छन् । ती संस्थाहरुले हिजो दिउँसो ४ बजेदेखि ५ बजेसम्म अकस्मात इन्टरनेट सेवा बन्द गरेपछि ग्राहकहरु हडबडाउँदै इन्टरनेट प्रदायकहरुलाई फोन लगाए ।
तर ग्राहकहरुको अनुमान विपरीत उक्त संस्थाहरुमा फोन गर्दा फोनले यस्तो जवाफ दियो- 'आदरणीय ग्राहकहरु हालैका दिनमा निजी क्षेत्रलाई सुरक्षा दिन सरकारले देखाएको लाचारीको विरोधमा इन्टरनेटसेवा प्रदायक संघले आज दिउँसो ४ देखि ५ सम्म इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएअनुसार यस अवधिमा तपाइँले पाउनु भएको असुविधाप्रति हामी क्षमाप्रार्थी छौँ ।'
उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपालले आफ्ना सदस्य उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै चरणबद्ध रुपमा विरोध कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो । त्यही घोषणाअनुसार महासंघ सम्बद्ध इन्टरनेट प्रदायक संघले पनि विरोधको यो शैली झिकेको कुरा संघका अध्यक्ष पवनमान शाक्यले इनशाडटकमलाई बताउनु भयो ।
"यो अवधि लम्बिन पनि सक्छ", चेतावनीको शैलीमा उहाँले भन्नुभयो- "उद्योग व्यवसाय सुचारु र ढुक्कसँग गर्ने अवस्था नहुञ्जेलसम्म विरोधको यो शैली जारी रहनेछ ।" आगामी दिनमा इन्टरनेट बन्द हुने समयावधि एक घण्टाबाट अझै बढ्ने सम्भावना रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । "यो संकेतात्मक विरोध हो, हामीले टायर बाल्नुभन्दा यसरी नै विरोध गर्नु असल ठान्यौँ", शाक्यले बताउनु भयो ।
क्या बात ! तर के प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला इन्टरनेट क्रेजी हुनुहुन्छ र यी सब कुरामा ध्यान दिनुहोला ??